(09) 86 10540, (09) 42 1021898
မျက်နှာ နှင့် ခန္ဓာ ကိုယ် အလှ အပ ပတ်သက်သည့် အများဆုံး မေးတတ်ကြသော မေးခွန်းများ ယခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ ကျန်းမာရေး /အလှအပ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းလေး တွေ က ကျွန်မ တို့ ဆိုင် ဖွင့်လာတဲ့ သက်တမ်း တလျောက် မှာ အမျိုးသမီးတွေ အများဆုံး မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို အလှအပ ကို စိတ်ဝင်စားသူ အမျိုးသမီးများ အားလုံး အတွက် တနေရာထဲမှာ ပေါင်းစည်း လေ့လာနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ရှင် ။ မေး ။ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပိန်အောင်လုပ်တာ ကစား
နေတဲ့အချိန်မှာပိန်တယ်။ ရပ်လိုက်ရင် ၀လာတယ်
ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ။
ဖြေ ။လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတဲ့ အချိန် မှာ မှန်မှန်လည်း လာ ကစားတယ် ။ အစား လည်း လျော့တယ် ဆိုတော့ ပိန်ပါတယ် ။ ရပ်လည်း ရပ်လိုက်ရော အစား က လည်း ကြိုက်သလို ပြန်စားတယ် ။ လှုပ်ရှားမှု က လည်း မရှိတော့ ၀လာတာပါ ။ ကစားတာ ရပ်လိုက်လို့ ၀ တာ တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ မထိန်းလို့ပါ ။ အစား ( သို့) လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခု နဲ့ ထိန်းနေရင် မ၀ ပါဘူး ။
မေး ။ အားကစား သင်တန်း တွေ မှာ မိန်းမ နည်း ၊ ယောကျာ်းနည်း ဆိုပြီး ကစားနည်း စနစ် နှစ်မျိုး ရှိတယ် ဆိုတာ က ဘယ်လို ကွဲပြားခြားနားပါလဲ။
ယောက်ျား နည်း ဆိုတာ က အလေးတုံး အကြီးတွေ ၊ Home Gym အကြီးတွေ နဲ့ အပေါ်ပိုင်း ကျစ်အောင် ပါ အဓိက ကစားတာ ဖြစ်ပြီး မိန်းကလေး နည်း ဆိုတာ က အလေးတုံး အသေးတွေ ၊ စက်အသေးတွေ နဲ့ ဘဲ ဖြေးဖြေး နဲ့ ပုံမှန် ကစားတာ မျိုးကို ဆိုလိုတာပါ ။ ဥပမာ - ယောကျာ်း နည်း နဲ့ သင်တဲ့ နေရာတွေ မှာ ကစား မယ် ဆိုရင်လည်း နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ နည်းပြ နဲ့ မှန်မှန် လေ့ကျင့်ပြီး မိမိ ခန္ဓာ ကိုယ် ၏ အချိုး အစား ကို အမြဲ သတိထား ပြီး လေ့ကျင့် ကစား နေသင့်ပါတယ် ။
မေး ။ ကလေး လိုချင်တဲ့ သူ တွေ ကို တချို့ သော ဆရာဝန်တွေ က သားအိမ် လေ့ကျင့်ခန်း ရအောင် ကစား ခိုင်း တတ်
တယ် ။ အဲဒါ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အကြံပြုချင်ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ ကလေး လိုချင်တဲ့ သူတွေ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှု နဲ့ လာ ကစားရင် ပိန်ဖို့ ကို ဦးမတည် ဘဲ ဖြေးဖြေး ကစား ရ ပါတယ် ။ ပြင်းထန် တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မကစား ရပါဘူး ။ ဓမ္မတာ လာပါနီး ရက် ဆို ကစား တာ ကို ခဏ နား ထားပြီး အဲဒီ လ အတွက် ကိုယ်ဝန် မရှိသေး ဘူး ဆိုမှ နောက်ထပ် ဆက် ကစား သွားသင့်ပါတယ် ။
မေး ။ အမျိုးသမီး တွေ မီးယပ် လာချိန် နဲ့ သွေးဆုံးချိန် များ မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ကို ဘယ်လို ကြိုတင် ကာကွယ် နိုင်မလဲ…
ဖြေ ။ ပုံမှန် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား ကစားသွားခြင်း အားဖြင့် စိတ်ပင်ပန်း ဖိစီးမှု များ ကို အထူး သက်သာ စေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်း စေ သည့် အတွက် ဓမ္မတာ လာချိန် နှင့် သွေးဆုံးချိန် များတွင် ဖြစ်တတ်သော ကိုက်ခဲ ခြင်း ဝေဒနာများ နှင့် စိတ်တို ၊ စိတ်ဓာတ်ကျ ၊ စိတ်ဂယောက် ဂယက် ဖြစ်ခြင်း ဝေဒနာများ ကို ပါ အထူး သက်သာ ပျောက်ကင်း စေနိုင်ပါတယ် ။ မေး ။ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား ကစားခြင်း ၏ အကျိုး ကျေးဇူး များ ကို ပြောပြပါ ။
ဖြေ ။ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား ကစားခြင်း အားဖြင့် သွေးတိုးရောဂါ ၊ နှလုံး သွေးကြောပိတ် ရောဂါ ၊ လေးဘက်နာ ရောဂါ ၊ အ၀လွန် ရောဂါ ၊ အညောင်းမိ ရောဂါ နှင့် စိတ်ပင်ပန်း ဖိစီးမှုရောဂါများ ကို အထူး သက်သာ ပျောက် ကင်းစေ နိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီး တွေ နဲ့ ကလေး မီးဖွားပြီး အ၀လွန် အမျိုးသမီး တွေ အတွက် ဘယ်လို အကြံ ပြုချင် ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေ လည်း ကလေး မီးဖွားပြီး ကလေး နို့စွဲတာ ကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်တိုင်း ကျ နေထိုင် စားသောက်
ခြင်း ကို ရှောင်ကြဉ် သင့်ပြီး နှစ်သက်ရာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ကစားမှု တခုခု ကို မှန်မှန် ပြုလုပ်ပြီး သတိထား ၍ နေထိုင် စားသောက်နေ သင့်ပါတယ် ။
မေး ။ အကြောလျော့ လေ့ကျင့်ခန်း က အားကစား လုပ်သူ တွေ အတွက် ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိစေပါသလဲ ။
ဖြေ ။ အကြောလျော့ လေ့ကျင့်ခန်း ကို ပုံမှန် လေ့ကျင့် ကစားသွားခြင်း အားဖြင့် အညောင်းမိခြင်း ကို ကာကွယ် နိုင်ပြီး ခါးကြောညပ်ခြင်း ၊ ခါးနာခြင်း ၊ လက်ပြင်ကြော ငုပ်ခြင်း ၊ အုန်းလွဲခြင်း စသည့် အကြောညပ် ဝေဒနာ အမျိုးမျိုး ကို အထူး သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ် ။
မေး ။ တချို့ လူတွေ က စစချင်း ကစားရင် အရမ်းကျတယ်…နောက်ပိုင်း ကျတဲ့နှုန်းက နှေးလာတယ်..အဲဒါ မျိုး ဆိုရင် ဘယ်လို ဆက် ကစားသင့်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ အဲဒီလို နှေးလာတဲ့ အခါ ကျရင် တတ်ကျွမ်း နားလည်တဲ့ နည်းပြတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အကြိမ်ရေ တိုးခြင်း ၊ အလေးတိုး ခြင်း ၊ ကစား နည်း စနစ် ပြောင်းပေးခြင်း ၊ အစား ပိုလျော့ခြင်း ဖြင့် ဆက်လက် ကစားသွား သင့်ပါ တယ် ။
မေး ။ ဆိုင် မှာ အဆီချ ထားရင် ဖြစ်ဖြစ် ကစား ထားရင် ဖြစ်ဖြစ် အထိုက် အလျောက် ကျသွားပြီး မှ အိမ်မှာ အစား ဆက်
ထိန်း နေပါလျှက် ထပ် မကျ တော့တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ။
ဖြေ ။ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုကို ကျအောင်ချတာ နဲ့ ရှိပြီးသာ ။ ခန္ဓာ ကိုယ် ကို မတက်အောင် ဆက်ထိန်းတာ မတူ ပါဘူး ။ မတက်အောင် ထိန်း တာ ဆိုရင် အစား ကို ပုံမှန်လေး ထိန်းစားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း တခု မှန်မှန် ယူ ၊ အစား လျော့ပြီး နှစ်သက်ရာ ကစားနည်း ၊ အဆီချနည်းတစ် ခုခု နဲ့ ထိန်းရသလို ၊ ချထားတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် တခုကို နောက်ထပ် ထပ် ကျချင်တာ ဆိုရင် လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အနေအထား တခု ရောက် တဲ့ အထိ အဆီချတာ နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ထပ်ကစားတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အစားပါ ထပ်လျော့သွားမှ မိမိ လိုချင်တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် အချိုး အစား ကို ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ လက်ပြင် ကုန်းနေတတ်တဲ့သူ တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းကို ဖော်ပြပေးပါ ။
ဖြေ ။အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းက ခါးပေါ်မှာ လက်လေးလုံးတင်နေအောင် အမြဲ သတိထားပြီး ခါးဆန့် နေခြင်းဖြင့် အလိုလို မတ်ပြီး စမတ်ကျ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ အပင်ပန်းလည်း မခံနိုင် ၊ အမောလည်း မခံနိုင်တဲ့ သူတွေ လာကစားချင်ရင် ဘယ်လို အကြံကောင်းမျိုး ပေးသင့် ပါ သလဲ ။
ဖြေ ။ ပိန်ဖို့ လှဖို့ ကို အရင်ဆုံး ဦးစား မပေးဘဲ ပထမဆုံး အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း ကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်သင့်ပြီး သက်လုံကောင်းပြီး အမောခံနိုင်အောင် ဖြေးညင်းညင်သာသော လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့် အလေ့အကျင့် ရအောင် အရင်စ ကစားသွားသင့်ပါတယ် ။
မေး ။ Aerobic လိုလေ့ကျင့်ခန်း မျိုး ကစားတဲ့ အခါ ခြေသလုံးအရိုးများ ယောင်လာတတ်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ။
Aerobic လိုလေ့ကျင့်ခန်း မျိုး ကစားတဲ့ အခါ အခပ်မသင့်ရင် ခြေသလုံး အရိုးများ ယောင်လာတတ်တယ် ဆိုတာ လူတစ်ကိုယ်လုံး ရဲ့ weight ကို ခြေသလုံးရိုး က ထမ်းထားရတဲ့ အတွက် ဖြစ်သလို ၊ စ ကစားတဲ့သူ က ဖေါ့ ပြီး မခုန်တတ်သေးတာမို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ Over Weight ခန္ဓာ ကိုယ် ကနေ ပိန်ချင်တာ ဆို အချိန် ဘယ်လောက်ယူရမလဲ ။
ဖြေ ။ ပုံမှန်လေး အထိုက်အလျောက် ပိန်ချင်တာ လောက်ဆိုရင် ( ၃ ) လ လောက် အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ထို့ ထက် ကို လုံးဝ သိသိသာ သာ ပိန်ချင်တယ် ဆိုလျှင်တော့ ( ၆ ) လ မှ ( ၁ ) နှစ် ခန့် အတိုင်း အတာ အထိ အစား လျှော့ရင်း ဖွဲရှိရှိ နဲ့ မှန်မှန် နေထိုင် စားသောက် သွားဖို့ လိုပါတယ် ။
မေး ။ တချို့ မိန်းကလေး တွေ ကစားနေချိန်မှာ ပိန်တယ်…မကစားတော့တဲ့ အခါမှာ ပေါ်ပိုင်းကြီး ကြီးလာတတ် တယ် ဆိုတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ….
ဖြေ ။ အဲဒါ က ကိုယ် တက်ချင် ကျချင်တဲ့ နေရာ ကို စိတ်ထည့်ပြီး ကစားတတ်ရပါတယ် ။ ကျချင်တာ က ကျောကုန်း မှာ ကျောကုန်း ကို စိတ်မထည့်ဘဲ ၊ လက်မောင်း အားကြီး နဲ့ ကစားနေရင် ၊ လက်မောင်းတွေ ကြီးလာမယ် ၊ ရင်အုပ်တွေ ကျယ်လာမယ် ၊ အပေါ်ပိုင်း တွေ ကြီးလာပါမယ် ။ အဲဒါ က လည်း ကစားနေတဲ့ အခါ မှာ လှုပ်ရှားမှု ရနေတဲ့ အတွက် ပိန်နေတာ ဖြစ်ပြီး ရပ်လိုက်လို့  ကိုယ့်မှာ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခါကျရင်ကစားနေချိန်တုန်းကကိုယ်မှားပြီးအားထည့်ကစားမိခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတွန်းအား ပေးသလို ဖြစ်စေ
တဲ့အတွက် အဲဒီ နေရာတွေ က ပိုကြီး လာတတ်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ လှပတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် တစ်ခု ကို တစ်သက်တာ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်ရပါမလဲ ….
ဖြေ ။ အဆီအဆိမ့် ၊ ဆီကြော်မုန့် ၊ အချိုရည် ၊ ရေခဲရေ ၊ အလွယ်တစ်ခုရသော Fast Food ခေါ် အစားအစာများ အလွန် အမင်း စား သောက်ခြင်း ကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပြီး မလိုအပ်ဘဲ အဆာပြေ ၊ အပျင်းပြေ ခဏခဏ စားတာ ကို ရှောင်ဖို့ လိုပါ တယ် ။ ထို့ပြင် မိမိတို့ တစ် နေ့တာ နေထိုင် စားသောက်သမျှ အစာ အာဟာရ နှင့် သင့်တော်သည့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုမျိုး မိမိ တွင် အမြဲ ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ရန်လိုပြီး မိမိ ၏ ကိုယ် အလေးချိန် ကို စံနှုန်း တစ်ခု ထား၍ အမြဲထားပြီး တက်တာ နှင့် ချက်ချင်း အစားအသောက် ပြန် ဆင်ခြင် ၊ ကိုယ်လက်လှုပ် ရှား ကစားမှု တစ်ခုခု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး မှာမှ ညစာ စားပြီး အိပ်ရာဝင်တဲ့ သူ ဟာ ပုံမှန်စားတတ်တဲ့ သူတွေ ထက် ပို ၀ တတ် တယ် ဆိုတာ
ဖြေ ။ ညအိပ်ရာ ၀င်ခါနီး ညစာစားပြီး လျှင် လှုပ်ရှားမှု လုံးဝ မရှိတော့ဘဲ ၊ TV ထိုင် ကြည့်ခြင်း ၊ လှဲလျောင်း အနားယူ အိပ်စက်ခြင်း သာ ရှိတော့၍ အဲဒီ သူတွေ ဟာ ပုံမှန် စားတဲ့ သူတွေ ထက် ပို ၀ လာတတ်တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါ တယ် ။
မေး ။ တချို့သော အမျိုးသမီးတွေ ငယ်ငယ်တုန်း က ဘယ်လောက် စားစား လုံးဝ ကို ၀လာမယ် မထင်ရတဲ့ သူ မျိုး ဖြစ် ပေမယ့်…အိမ်ထောင် ကျ ကလေး မွေးပြီးတဲ့ အချိန်မျိုး မှာ ထိန်းမရအောင် ၀တက် လာတာ ဘာဖြစ်လို့ ပါလဲ ။ အဲဒီလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက် ရမလဲ ။
ဖြေ ။ အမျိုးသမီးတွေ အများစု က အသက် ( ၂၅ ) နှစ်ကျော် လာတာ နဲ့ ပုံမှန်ထက် စ တင် ၀ လာတတ်တဲ့ သဘော မျိုးရှိပါတယ် ။ အဲ
ဒီလို စ ၀ လာတာ နဲ့ သတိထားပြီး အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အခါ မှာ လည်း တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မ၀မယ့် ကိုယ်ဝန် တားနည်း တစ်ခုခု ရွေးချယ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ကလေး ယူရင်လည်း မီးဖွားပြီး အချိန် အကန့်အသတ် တစ် ခု ရသည် နှင့် အနေ အထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပြီး နှစ်သက်ရာ ၀ိတ်ချနည်း တစ်မျိုးမျိုး ကို ရွေးခြယ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်း သွားနိုင်ပါတယ် ။ မေး ။ အရပ် ရှည်ချင် တဲ့ အမျိုးသမီးလေး တွေ အတွက် ဆို ဘယ်လောက် လေ့ကျင့် ကစားရမလဲ ။
ဖြေ ။ အရပ်ရှည်တာ က မိဘ မျိုးရိုး နဲ့ သက်ဆိုင် သလို နေထိုင် စားသောက်တဲ့ အစားအစာ ၊ အာဟာရ ၊ ဓလေ့ နဲ့ လည်း သက်ဆိုင်ပါ တယ် ။ အကြမ်းမျဉ်း ဆိုလျှင် အမျိုးသမီးလေးတွေ ဆို အသက် ၂၁ နှစ်ခန့် အထိ ရှည် နိုင်တယ် လို့ ဆိုကြပါတယ် ။ အနည်းဆုံးတော့ ၆ လ ခန့် ကစား မှ လက်မ ၀က် / ၁ လက်မ ခန့် လောက် သာ ရှည်ကြတာ များပါတယ် ။
မေး ။ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် မ ၀ ရအောင် ဘယ်လို ကိုယ်ဝန် တား နည်း မျိုး က အကောင်း
ဖြေ ။ အဲဒါ ကတော့ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ခန္ဓာ ကိုယ် ဖွဲစည်းပုံ သဘောတရားခြင်း မတူညီကြ တဲ့ အတွက် နားလည် တတ်ကျွမ်း တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မိမိ ။ ခန္ဓာ ကိုယ် နှင့် သင့်တော်သည့် ကိုယ်ဝန် တား နည်း တစ်ခုခု ကို ရွေးခြယ် အသုံးပြုခြင်း က အ ကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ မီးယပ် လာချိန် မျိုး မှာ ကစားလို့ / အဆီချ လို့ ရပါသလား ။
ဖြေ ။ အလွန် အမင်း ဆင်းတတ်တဲ့ သူမျိုး ဆိုရင် မီးယပ် လာချိန်မှာ အဆီချစက် တွေ နဲ့ အဆီချေ လိုက်ရင် / ကစားလိုက် ရင် ပိုပြီး ဆင်း လာတတ်တဲ့ တာ က လွဲရင် တခြား ပြသနာ ကြီးကြီး မားမား မရှိပါဘူး ။ ကိုက်ခဲ တတ် တဲ့သူ ဆိုရင်တောင် အဆီချစက်တွေ နဲ့ခါးတွေကို ဆွဲလိုက် ရင် (သို့) ကစားလိုက်ရင် နာကျင် ကိုက်ခဲ တာ ကို တောင် သက်သာ သွားစေပါတယ် ။ မေး ။ ကစားခုန်စား ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ထွက်တဲ့ ချွေး က အသားအရည် ကို စိုပြည် လှပစေတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ သလား ။
ဖြေ ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ကစားပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ခန္ဓာ ကိုယ် က ချွေးပုတ်တွေ ထွက်ပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းစေတဲ့ အတွက် အသား အရည် ကို စိုပြေ လှပစေပါတယ် ။ မေး ။ မီးဖွားထားလို့ အရမ်း ၀နေတဲ့သူ က အဆီချ လို့ လည်း မရသေးဘူး ဆိုရင် ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေ နဲ့ ပိန်အောင်
ဖြေ ။ အစားအသောက် ကို ချင့်ချိန် ၍ စားပြီး မပြင်းထန်သော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု များ ကို လေ့ကျင့်ကစား သွားရင်း ဖြင့် ပိုမိုခံနိုင်ရည် ရှိလာသည့် အခါ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတိုး ၍ လေ့ကျင့် ကစားသွားပြီး တဖြည်းဖြည်း ပိန်အောင် လုပ်နိုင် ပါတယ် ။
မေး ။ ကစားရင် ကိုယ်ကျချင် တက်ချင်တဲ့ နေရာကို စိတ်ထည့်ကစားရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်…စိတ် မထည့် ဘဲလှုပ်ရှား နေရုံ နဲ့ ရော မကျနိုင်ဘူးလား ။
ဖြေ ။ စိတ် မထည့် ဘဲ လှုပ်ရှား နေရုံနဲ့ အထိုက်အလျောက် ကျသည်မှာ မှန်သော်လည်း ကျချင်သည့် နေရာ ကို စိတ်ထည့် ၍ ကစားချင်း က ပိုမို ထိရောက်စေပါတယ်။ ဥပမာ - ပက်လက်လှန် အိပ်ပြီး ခြေထောက် ကို ၉၀ံ စုံမြှောက်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ဆိုပါတော့ ။စိတ်မထည့်
ဘဲ ခြေထောက် ကို စုံ လိုက် သတ်မှတ် အကြိမ် အရေ အတွက် ပြည့်အောင် ကစားသူနှင့် ဗိုက်နေရာ ဆို ဗိုက် သေသေချာချာ စိတ်ထည့်
သွင်း ပြီး ကစားသည့် သူက ပိုပြီး အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော စိတ်ထည့် ကစားတတ်သူက သတ်မှတ် အကြိမ် အရေအတွက် ပြည့်ရုံမှ မက ၀မ်းဗိုက် ကြွက်သား များ ကို ပါ ပိုမို ထိရောက်စေပြီး ကျစ်လျစ် သန်မာ လာစေရန် ကစားနိုင် သော ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ။
မေး။ ပိန်တဲ့သူ တွေ ကိုယ် ခန္ဓာ အချိုးကျ လှပ အောင် ကစားရင် ပို ပိန်သွားနိုင်မလား ။
ဖြေ ။ ပိန်တဲ့သူ ၏ ခန္ဓာ ကိုယ် အနေအထား ကို ကြည့်ပြီး နေ့တိုင်း ကစားရန် ၊ ရက်ခြား ကစားရန် စသဖြင့် လေ့ကျင့် ပေးရပါတယ် ။ အ
ရမ်း ပိန်တဲ့သူ ကို နေ့တိုင်း ကစားခိုင်းလျှင် ပင်ပန်းပြီး ပိုပိန် သွားတတ်ပါသဖြင့် အာဟာရ ဖြစ်သော အစားအစာများ ကို စား၍ ရက်ခြားကစားစေခြင်း ၊ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စေခြင်း ၊ စိတ်ဖိစီးမှု ရှောင် စေခြင်း ဖြင့် ပိုပိန် မသွားဘဲ ခန္ဓာ ကိုယ် အချိုးကျ လှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ စစချင်း ကစားတဲ့အချိန် မှာ အကြောလျော့ ရင် ထိအောင် အရမ်း ပြင်းပြင်း မလုပ်ရဘူးလို့ ကြားဖူးတာ ဘာကြောင့်
ဘာကြောင့် ပါလဲ ။
ဖြေ ။ ကစားသည့်သူက ထိအောင် မကစားနိုင် သေးသည် ကို သင်ပေးသည့် နည်းပြ များ က မထိသည် ကို ထိအောင် ဖိပေး လိုက်လျှင် လွယ်သလို ရှိပေမယ့် လာကစားသည့်သူ က ပုံမှန် ထက် ပိုမို နာကျင်သွားတတ် သည့် အတွက် သူ့အလိုလို ကစားသွားရင် တဖြည်းဖြည်း ချင်း ထိအောင် ကစား သွား နိုင်တာ က ပိုကောင်း တာကြောင့် ဖြစ် ပါတယ်။
မေး ။ ကစားတာ ကို ဗိုက်သားတွေ ကြွက်သားလို ကျစ်လစ် နေတဲ့ အထိ ကစားချင်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကစား ရပါ
ဖြေ ။ နှစ်ကာလ အတန်ကြာ သည် အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကစား သွားမှ ရပါမယ် ။
မေး ။ ပုံမှန်ကစားတာ နဲ့ အဆီကျ ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတာ ဘယ်ဟာက ပိုသင့်တော်တယ် ထင်ပါသလဲ…..။ ဖြေ ။ အလျှင် အမြန် ပိန်ချင်တဲ့သူမျိုး ( ဥပမာ - မင်္ဂလာဆောင် ၊ ဘွဲ့၊ နိုင်ငံခြားသွားရန် စသဖြင့် …. အရေး တကြီး နှင့် အလျှင် အမြန် ပိန် ချင်တဲ့သူဆိုလျှင် အဆီကျ ဆေးလိမ်းပြီး စက်နဲ့ အဆီချတာက ပိုပြီးသင့်တော်ပြီး ဖြေးဖြေး နဲ့ မှန်မှန်ပဲ ပိန်ချင်တယ်၊ ကျန်းမာရေး ကောင်း ကောင်းမယ် ၊ Stress လည်းလျှော့ချင်တယ်၊ လှုပ်ရှားမှု လည်း ရှိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ကစား သွားတာ ကောင်းပါတယ် ။
မေး ။ အဆီချတဲ့ သောက်ဆေး ၊ လိမ်းဆေး အများစု က သူတို့ ဆေးအညွှန်းတွေ မှာ သုံးပြီး ဘယ်လောက် ကြာ ရင် စသိ
သာ ပြီလို့ ဆိုပေမယ့် …တကယ် သုံးကြည့်တဲ့ အခါ မှာ အဲဒီ အတိုင်း မသိသာတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ။
ဖြေ ။ လိမ်းဆေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သောက်ဆေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ချည်းဘဲ သုံးတာ ထက်စာလျှင် ကစားတာ ၊ အဆီချ တာ တစ်ခုခု နဲ့ တွဲမှ ပိုကျ တတ်တဲ့ သဘော တရား ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ။
မေး ။ အဆီချတာက အခပ် မသင့်ရင် အစာအိမ် သွားထိ လို့ ဆေးရုံတင်လိုက် ရတာ တို့ ၊ သားအိမ် ကို ထိပြီး သူ့ အချိန်
အချိန် မဟုတ်ဘဲ သွေးတွေ အများ ကြီး ဆင်းလာတတ်တယ် ဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ။
ဖြေ ။ Massage လုပ်ရင် ဗိုက်ပေါ် နှိပ်လို့ ၊ ရိုက်လို့ မရတာ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်တစ်ခု က အဆီချ နည်း တစ်ခု ကို တိုက်ရိုက် သင်လာတဲ့ ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ အဲဒီ ပိုင်ရှင် က နေ ပြန်သင် ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ က ပြန်လုပ်ပေးတာကြောင့် တစ်ကြောင်း ၊ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ပေးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ကို အများစု က Side Effect တွေ ကြိုတင် မရှင်းပြ ထားဘဲ ကိုယ် လုပ်ပေး သည့် သူ မကျ လို့ မရ ဆိုသည့် အသိ ကို သာသွင်းပေးထားတဲ့ အတွက် အန္တရာယ် ဆိုတာ ကို နားမလည် ဘဲ မကျမှာ စိုးတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ကြရတာ ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
မေး ။ အသားကျစ်တဲ့ သူ ဆို အဆီချရင် ချရခက် လို့ ချက်ချင်း မကျဘူး ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ။
ဖြေ ။ အသားကျစ်တာ ပျော့တာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ကျစ်ပေမယ့် လွယ်လွယ် ကျတာ မျိုး ရှိသကဲ့ ပျော့ပြီး ချရ ခက် တာ မျိုးလည်း ရှိပါတယ် ။
မေး ။ အဆီချ လိုက်တဲ့ အသားက ပျော့ပြဲ သွားနိုင်လား ။
ဖြေ ။ အသားကျစ် တဲ့သူ ချရင် အထိုက်အလျောက် ပျော့နိုင်ပေမယ့် အသားပျော့ တဲ့ သူ ချရင်တော့ ထူးခြားပြီး ပျော့ မသွားပါဘူး ။
မေး ။ တချို့သော အဆီချ လိမ်းဆေး တွေ က အခပ်မသင့် ရင် အသားတွေ နီပြီး အဖုတွေ ထွက်လာတတ်တာ ကြားဖူးပါ
တယ် ။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ။
ဖြေ ။ Sensitive Skin တွေ ဆို ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ကိုယ့် ခန္ဓာ ကိုယ် က Sensitive ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုရင် မလုပ်ခင် မှာ လုပ်ပေးမယ့် ဆိုင် နဲ့ ကြိုတင်ပြောပြ ဆွေးနွေး ထားသင့်ပါတယ် ။
မေး ။ ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေ က ပေါင်ချိန် အမြန်ဆုံး ကျစေနိုင်ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ အစားအသောက် ကို အလွန်အမင်း လျော့ စားခြင်း (သို့) ပိန်ဆေး ၊ (သို့) ပိန်ဆေး အနွယ်ဝင် တစ်မျိုး မျိုး က သာ ပေါင်ချိန် ကို ရုတ်တရက် ကြီး ယူပစ် လိုက်သလို လျော့ကျ သွားစေနိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ Sounna ဆိုမျိုး ချွေးပေါင်းတာက ကိုယ်အလေးချိန် ကို အမြန်ဆုံး ကျစေပြီး အသားအရည် ကို စိုပြေလှပ စေတယ်
စေတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ။
ဖြေ ။ Souna လိုမျိုး ချွေးထုတ်တာကို နေ့တိုင်း မလုပ်သင့်ပါ ။ နေ့တိုင်းသုံးရင် ခန္ဓာကိုယ်က ချွေး တွေ အများကြီး မလိုအပ်ဘဲ နေ့ တိုင်း နေ့တိုင်း ထွက်ရတဲ့ အတွက် ရေ ဓာတ်တွေ ဆုံး ရှုံးပြီး အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါ တယ် ။ တခါ ပေါင်းအိုး ထဲ က ထွက်လာ လို့ ရေတန်းချိုး မယ် ဆိုရင် လည်း ဗြုန်းစားကြီး အပူ အအေး ပြောင်းသွားသည့် အတွက် အခပ်မသင့် လျှင် အန္တရာယ် အများ ကြီး ရှိနိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ အဆီချလိုက်တဲ့ အခါ အဆီပိုတွေ က ဘယ်ကို ရောက်သွားပြီး ကျသွားစေတာပါလဲ ။
ဖြေ ။ အဆီချဆေးလိမ်း Massage လုပ်ပြီး စက်တွေ နဲ့ အဆီကို ချေလိုက်တာမှာ အဲဒီ အဆီတွေ က ချွေးတွေ ၊ ဆီးတွေ နဲ့ ၀မ်းက နေပါ သွားပြီး အဆီကျသွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေး ။ ဘယ်လို လူမျိုး တွေ ဆို အဆီချ မလုပ်သင့်ဘူးလဲ ။
ဖြေ ။ နှလုံး ခွဲစိတ်ထားတဲ့သူ ၊ နှလုံးမှာ စက် တတ်ထား တဲ့သူ….ကိုယ်လက် အင်္ဂါ ကလီစာ တစ်ခုခု ဖြတ်တောက် အစား ထိုးထား တဲ့ သူမျိုးဆို လုံးဝ မလုပ်သင့် ပါဘူး ။ ဗိုက်ခွဲပြီး ကလေး မွေးထားတဲ့ သူဆိုရင် လည်း အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ် ရှိ မှ သာ လုပ်သင့်ပါတယ် ။ အဆီချ မလုပ်ခင်မှာ လည်း မိမိ ခန္ဓာကိုယ် ၏ ဖြစ်တတ်သည့် ပြသနာ များ ကို လုပ်ပေးမည့် ဆိုင် နှင့် သေချာစွာ တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ပြီးမှ လုပ်သင့် ပါတယ် ။
မေး ။ ခြေသလုံး အဆီချတာ ချရခက်လို့ တချို့ ဆိုင်တွေမှာ ဆို မလုပ်ပေးဘူးတဲ့ ။ အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား ။
ဖြေ ။ လူတစ်ကိုယ်လုံး ရဲ့ ကိုယ် အလေးချိန်ကြီး ကို ခြေသလုံး က ထမ်းထားရတဲ့ အထွက် သူ့နေရာ က အဆီပို မဟုတ်ဘဲ ကြွက်သား အစိုင်အခဲ လိုဖြစ်နေတဲ့ အတွက် တချို့ ဆိုင်တွေ က မချပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်မ တို့ ဆီမှာလည်း ကိုယ်တာဝန်ယူပေးနိုင် / မယူပေး နိုင် ကို အရင် ကြည့်ပြီး မှ ခြေသလုံး ကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ။
မေး ။ ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတာ ကို ( ၁၀ ) ရက် မှာ ပေါင်ချိန် ဘယ်လောက် ၊ အတိုင်း ဘယ်လောက် အထိ ကျ သွား နိုင်
ဖြေ ။ ဆေးလိမ်းပြီး စက်နဲ့ အဆီချတာက ( ၁၀ ) ရက် မှာ ၃ ပေါင် က နေ ၇ ပေါင် ၀န်းကျင် ခန့်ကျနိုင်ပြီး အတိုင်း အတာ အားဖြင့် ပြော ရရင် ပုံမှန် ခန္ဓာ ကိုယ် ဆိုရင် (၁၀) ရက် မှာ ၃ လက်မ ၊ ၄ လက်မ လောက် အထိ ကျနိုင်ပြီး အရမ်း ဝ တဲ့ Over Weight တွေ နဲ့ ဗိုက်အိုး အကြီးကြီးတွေ ဆို (၁၀) ရက် မှာ ၇ လက်မ ၊ ၈ လက်မ အထိ ကျ နိုင် ပါတယ် ။
မေး ။ အဆီ တစ်ခါ ချထားရင် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခံပါသလဲ ။
ဖြေ ။ ဗိုက်လိုမျိုး ဆိုရင် မထိန်းဘဲ စိတ်လွှတ်ပြီး ကြိုက်သလို နေထိုင်စားသောက် တာ နဲ့ ချက်ချင်း ပြန်တက်နိုင် ပြီး ကျန်တဲ့ လက်မောင်း၊ ပေါင် ၊ ခြေသလုံး ၊ ကျောကုန်း ၊ ချိုင်း စတာတွေ က တော့ ဒီ ကိုယ် အလေးချိန် ၀န်းကျင်မှာ ရှိသ၍ ချက်ချင်း ပြန်တက်ရန် ခဲရင်းပါတယ်။
မေး ။ ပိန်ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ကို ဖော်ပြပေးပါ ။
ဖြေ ။ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း ၊ မျက်တွင်းကျခြင်း ၊ ပါးရိုးကျခြင်း ၊ ရင်တုန်ခြင်း ၊ ၀မ်းချုပ်၊ ၀မ်းလျှော ခြင်း ၊ စိတ်က ယောက် ကယက်ဖြစ် ခြင်း စတဲ့ Side Effect များ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ မျက်နှာ အဆီချ လုပ်တယ် ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ ။
ဖြေ ။ မျက်နှာ အဆီချလုပ်တယ် ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေ စတင် ၀ လာရင် ဖြစ်လာတဲ့ အဆီများတဲ့ မျက်နှာပြင် နဲ့ မေးစေ့ နှစ်ထပ် အဆီပို များ ကို ဆေးထိုးဆေးသောက် ရန်မလို ၊ အန္တရာယ်လည်း မရှိသော Facial Machine , Facial Massage , Quality Skin Care များဖြင့် အချိန်တို ( ၁၀ ) ရက် အတွင်း ပြုပြင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေး ။ Face Lift ဆိုတာ လည်း ရှင်းပြပါအုံး ။
ဖြေ ။ Face Lift ဆိုတာ က သက်လတ် အမျိုးသမီးတွေ မျက်နှာ ဖောင်းသူ ၊ မျက်နှာ သွယ်သူ မရွေး အသက် အရွယ် တစ်ခု ရလာရင် မျက်နှာ ဖောင်းသူ က လည်း မျက်နှာပြင် နဲ့ မေးရိုး ၊ ပါးရိုးတွေ လျော့ကျလာ ပြီး အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်လာသလို မျက်နှာသွယ်သူ ကျတော့လည်း မျက်နှာချောင်ကျ ခွက်ဝင်လာပြီး အရေးအကြောင်း တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာကို အချိန်တို ( ၁၀ ) ရက် အတွင်း ပိုမို ထိရောက် သော Skin Care Facial Machine , Facial Massage , Quality Skin Care များဖြင့် ဆေးထိုးဆေးသောက် ရန်မလို ၊ အန္တရာယ် လည်း မရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် အချိန်တို ( ၁၀ ) ရက် အတွင်း အထူး ပြုပြင် ဆောင်ရွက် ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေး ။ မျက်နှာ အဆီချ ၀န်ဆောင်မှု ဆိုတာ နဲ့ Face Lift လုပ်တယ် ဆိုတာ ဘာများ ကွဲပြားခြားနား ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ မျက်နှာ အဆီချခြင်း ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေ စတင် ၀ လာရင် ဖြစ်လာတဲ့ မျက်နှာပြင် အဆီ နဲ့ မေး နှစ်ထပ် ဖြစ်တဲ့ သူများ အားလုံး အသက်အရွယ် မရွေး လုပ်နိုင်ပြီး Face Lift ဆိုတာ ကတော့ အသက် ၃၀ ၀န်းကျင် က နေ အသက် ၆၀ ကျော် အထိ မျက်နှာ ဖောင်းသူ ၊ မျက်နှာသွယ်သူ မရွေး ပွစိစိဖြစ်ပြီး ၊ လျော့တွဲ ကျ လာ တဲ့ မျက်နှာပြင် ၊ မေးရိုး နဲ့ မျက်နှာပြင် အရေးအကြောင်း တွေ ကို ပြန်တင်းအောင် လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ လုပ်ကြတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
မေး ။ Facial Srevice တွေ လုပ်ရင် ဘယ်နှစ်ရက် အကြာမှာ မှ စတင် သိသာနိုင်ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ စလုပ်ပြီး ၇ ရက် ၈ ရက် ခန့် အကြာတွင် စတင် သိသာလာနိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ Facial Service လုပ်တဲ့ သူတွေ မလုပ်ခင် မှာ ဘာတွေ ကြိုတင် ဆွေးနွေးသင့်ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ မိမိ မျက်နှာ နှင့် အသားအရည် ၏ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ နှင့် Facial Treatment ယူဖူးခြင်း ရှိမရှိ Botox ထိုးဖူးခြင်း ရှိမရှိ ၊ Laser Treatment ယူဖူးခြင် ရှိမရှိ ၊ လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော Skin Care အမျိုးအစား ၊ မလုပ်ခင် ဘာတွေ ကြိုရှောင်ရမလဲ ၊ လုပ်နေစဉ် ဘာတွေ ရှောင်သင့်သလဲ စသည်ဖြင့် ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားသင့်ပါတယ် ။
မေး ။ Facial Massage လုပ်ပေးခြင်း ဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုး ကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပါ ။
ဖြေ ။ Facial Massage Treatment ကို မှန်မှန်ယူခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင် ကြွက်သားများ ပြေလျော့စေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းစေကာ အသားအရည် ကို တင်းရင်း လှပ စေပါတယ် ။
မေး ။ Facial Shaping ( မျက်နှာ အဆီချတာ ) နဲ့ Facial Lifting ( မျက်နှာ ပင့်တင်ထားတာ) တွေ က ဘယ်လောက် အချိန် ကြာကြာ ခံနိုင်ပြီး သူ့ထက် အချိန်ကြာကြာ ခံအောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းသင့် ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ မျက်နှာအဆီချ တာ က ဒီ Weight ၀န်းကျင်မှာ ရှိသရွေ့ ချက်ချင်း ပြန် မတက်နိုင် တဲ့ အတွက် အနေအထိုင် အစားအေသာက် ဆငိ
ခြင်ပြီး ထိန်းသိမ်း ထားရင် ပိုခံပေမယ့် ၊ Face Lift ဆိုတာ ကို ကျတော့ ဇရာကို ရပ်တန့် ထားလို မရနိုင်တဲ့ အတွက် ကိုယ် လုပ်ထားတဲ့ Treatment လေး ပိုမို အကျိုးရှိနေအောင် နေပူထဲ ထွက်လျှင် Sun Cream သုံးပေးခြင်း ၊ အပြင်မှ ပြန်လာလျှင် မိတ်ကပ်ဖျက်ခြင်း ၊ Facial Foam ၊ Day Cream ၊ Night Cream များကို မှန်မှန်သုံးပေးခြင်း ၊ သွေးသား မှန်အောင် ဂရုစိုက် နေထိုင် စားသောက်ပြီး ၊ ရေများ များ သောက်ပေးခြင်း ၊ လတ်ဆတ်သော သစ်သီးများ နှင့် သစ်သီး ဖျော် ရည်များ ကို မှန်မှန် သောက် ပေးခြင်း ၊ စိတ် ဖိစီးမှုများ ကိုရှောင်
ကြဉ်ခြင်း ၊ အိပ်ရေး ၀၀ အိပ်စက် အနားယူခြင်း နှင့် မျက်နှာ ကို ပစ်ထားပြီး ဆိုး လာမှ ဆိုင် ကို သွားမယ့် အစား မကြာမကြာ Facial Treatment ပြန်လုပ်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဇရာ ကို မလွန်ဆန်နိုင်သော်ငြားလည်း ရှိရင်း စွဲထက် တော့ အချိန်ကာလ ကြာမြင့်စွာ ပိုမို နုပျို လှပစေနိုင် ပါ တယ် ။
မေး ။ မိမိ အိမ် မှာ တစ်နေ့တာ Facial Treatment အတွက် ဘာတွေ လုပ်ပေးသင့်သလဲ ။
ဖြေ ။ နေပူထဲ ထွက်လျှင် Sun Cream သုံးပေးခြင်း ၊ အပြင်မှ ပြန်လာလျှင် မိတ်ကပ်ဖျက်ခြင်း ၊ Facial Foam ၊ Day Cream ၊ Night Cream များကို မှန်မှန်သုံးပေးခြင်း၊ တစ်ပတ်ကို တစ်
ကြိမ် ခန့် မျက်နှာ ပေါင်းတင် ပေးခြင်း ၊ သွေးသား မှန်အောင် ဂရုစိုက် နေ ထိုင် စားသောက်ပြီး ၊ ရေများ များ သောက် ပေးခြင်း ၊ လတ်ဆတ်သော သစ်သီး များ နှင့် သစ်သီး ဖျော် ရည် များ ကို မှန်မှန် သောက် ပေးခြင်း ၊ စိတ် ဖိစီးမှုများ ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ၊ အိပ်ရေး ၀၀ အိပ်စက် အနားယူခြင်း တို့ကို လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် ။
မေး ။ နေလောင်ကွက် (သို့) တင်းတိတ် ပျောက်တဲ့ Treatment လုပ်ထားရင် ဘာတွေ ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်း သင့်ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ နေပူထဲ ထွက်ရင် အဆောင်းအကာ ဆောင်းပြီးမှ အပြင်ထွက်တာ ၊ နေလောင်ကာ Lotion သုံး ပေးတာ ၊ ဗြုန်းခနဲ ပျောက်တဲ့ တင်းတိတ်ပျောက်ဆေး တွေ သုံးမည့် အစား ၊ အရည် အသွေး ပြည့် တဲ့ Skin Care တစ်မျိုးမျိုး ကို စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ စွဲသုံးပေးတာ တို့ ကို ပုံမှန် လုပ်ပြီး ထိန်းသိမ်း သွားသင့် ပါတယ် ။
မေး ။ ၀က်ခြံ မတွက်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ ။
ဖြေ ။ အပူ အစပ် ၊ အချဉ် ၊ အငံ စသည့် အစားအသောက်များ ကို ရှောင်ကြဉ်တာ ၊ ရေများများ သောက် ပေးတာ ၊ အမျိုးသမီး ဓမ္မတာ မှန်အောင် ၊ ဆီး ၊ ၀မ်း ၊ သွေး ၊ လေ မှန်အောင် ဂရုစိုက် ပေး တာ ၊ Skin Care တစ်မျိုးမျိုး ပုံမှန် သုံးပေးတာ တို့ ကို ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းပြီး နေထိုင် စားသောက် ကာကွယ် သွားနိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ မည့်သည့် အသက်အရွယ် က စပြီး Skin Care / Facial Treatment မှန်မှန် လုပ်သင့်ပါသလဲ ။
ဖြေ ။ အသက် ၁၈ နှစ် ၀န်းကျင် မှ စပြီး မိမိ အသက် အရွယ် နှင့် သင့်တော်သည့် Skin Care တစ်မျိုး မျိူး မှန်မှန် သုံးပေးသင့်ပြီး အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ်ခန့်မှ စပြီး မျက်နှာ လျော့ကျ မှု သက်သာ စေရန် ပိုမို ကောင်း မွန်သော နည်းလမ်းများ ဖြင့် ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အနေအထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်သွား သင့်ပါ တယ် ။
မေး ။ အားကစားသင်တန်းတွေ တော်တော်များများ မှာ Over Weight တွေ ဆို တစ်ချို့သော စက်တွေ ကို ၀ိတ်မနိုင်လို့ ဆိုပြီး မကစားခိုင်းကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ.....
ဖြေ ။ ကျွန်မ တို့ ဆိုင်နှင့်တကွ လူတိုင်း ကစားနိုင်တဲ့ သင်တန်းကြေး တစ်ခု နဲ့ ဖွင့်တဲ့ အားကစား သင်တန်းတော်တော်များများ ရဲ့ အဓိက အားနည်းချက် ဖြစ်ပါတယ် .... အဲဒါ ကတော့ ကျွန်မ တို့ ဆိုင်တွေ မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ စက်တွေ က အမှန် တကယ်တန်းမှာ အများသုံး / ဆိုင်သုံး စက် ကိရိယာများ မဟုတ်ဘဲ ၊ အိမ်သုံး အနေအထားလောက်သာ အသုံးပြုနိုင် တဲ့ စက်များ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ် .... Motor ပြေးစက် တစ်ခု ကို Over Weight အထိ သုံးစေချင်တယ် ဆိုရင် စက် ရဲ့ အရင်းအနှီး က အနည်းဆုံး သိန်း လေးငါးဆယ်လောက် ရင်းနှီး မှ သာ ရနိုင်ပါတယ်.... အဲဒီ သိန်းလေးငါး ဆယ် သော အရင်းငွေ ကို သာမာန် လူတိုင်း လာကစား နိုင်တဲ့ သင်တန်းကြေး တစ်ခု လောက်သာ ယူထားပြီး ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်တွေ မှာ သင်တန်းကြေး သက်သက် နဲ့ အရင်း ပြန်ရဖို့ ဆိုတာ တော်တော် မလွယ်ကူပါဘူး .... အားကစား စက်ပစ္စည်း ရောင်းတဲ့ ဆိုင် အများစု မှာ စက် တစ်ခု ၀ယ်လို့ Over Weight သုံးလို့ရသလား ....လို့ မေးရင် ရရ / မရရ ..... ရတယ် လို့ ဖြေ တတ်ကြ ပါတယ်.... သူတို့ ပြောတဲ့ Over Weight သုံးလို့ ရတယ် ဆိုတာ ထို Over Weight က တစ်ယောက်ထဲ အိမ်သုံးသုံး မယ် ..... ဆို ပြသနာ မရှိပေမယ့် .... ဆိုင်သုံး အများသုံး ဆို ရေရှည် မခံဘဲ ၊ တခဏတာ နဲ့ ပျက်သွားတတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ် ......
မေး ။ မီးဖွားထားသည့် သားအိမ် ကို အချိန်တို အတွင်း ပြန်လည် ၀ပ်စေနိုင်မည့် လေ့ကျင့်ခန်း ကို ဖော်ပြပေးပါ .....
ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး လက်နှစ်ဘက် ကို ခေါင်းအောက်တွင် ကျစ်လျစ်အောင် ပိုက်ပြီး ခြေထောက် ကို စုံလိုက် ၉၀ံအနေအထားရောက်အောင် မြောက်ပါ ....ပြန်ချသည့် အခါ ကြမ်းပြင် နှင့် မထိစေဘဲ တစ်ထွာခန့် ခွာ၍ ခြေဦး ကို ဆန့်ထုတ်ပြီး အသက်အောင့် လို့ .... စိတ် ထဲကနေ မိနစ်ရေတွက်ပြီး နေနိုင် သလောက် အချိန်ယူ၍ ရပ်တန့်နေပေးပါ .....ပြီးမှ အပေါ် ကို ပြန်မြှောက်ပြီး အစ ကနေ ပြန်လေ့ကျင့်ပါ..... ( အကြိမ်ရေ .... ၁၀ ခေါက် ၃ ကြော့မျှ .... ) နောက်တစ်မျိုး က ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး လက်နှစ်ဘက် ကို ခေါင်းအောက် တွင် ကျစ်လျစ်အောင် ပိုက်ပြီး ခြေထောက် ကို ကြမ်းပြင်မှ 30ံခန့် အကွာ အဝေးလောက် မှာ အထက်အောက် လှုပ်ရုံလေး မြှောက် ပါ....( အကြိမ်ရေ .... ၁၀ ခေါက် ၃ ကြော့မျှသာ .... )
မေး ။ ဗိုက်ချပ်အောင် ဘယ်လီရိုက်ရင် တင်လျှောတတ်တယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား .....
ဖြေ ။ ဘယ်လီရိုက်ရင် တင်လျှောတတ်လို ၊ ပေါင်ကျချင်လို့ ...ပေါင်လွှဲရင် ပေါင် ခါ ရင်လည်း တင် ကျတတ်ပါတယ်....လေ့ကျင့်ခန်း တော်တော်များများ ရဲ့ သဘော က တစ်ခု မှာ ကောင်းပေမယ့် တစ်ခု အတွက် သွားထိတတ်တဲ့ အတွက် ... ကစားလို့ အားလုံး ပြီးသွားရင် နောက်ဆုံး မှာ တင်ပါး လေ့ကျင့် ခန်း ကို ပြန်ကစားရပါတယ်....
မေး ။ အရမ်း ပိန်တဲ့သူတွေ မှာ ဇြစ်တတ်တဲ့ ..... ပေါင် နဲ့ တင် မကွဲပြားတာ ကို ကွဲပြားအောင် လုပ်လို့ရပါသလား .
ဖြေ ။ အများအားဖြင့် ပုံမှန် အရပ် အမြင့် နဲ့ ပေါင် ၇၀ / ၈၀ လောက် ရှိတဲ့ မိန်းကလေး တွေ မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ...... တက်ချင်တဲ့ သူတွေ ကို လုပ်ပေးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ထဲ မှာ ပေါင် နဲ့ တင် ကွဲပြားအေင် ကစား တဲ့ ကစားနည်း တွေ ရှိပါတယ်... အရမ်း ပိန်တဲ့ သူတွေ အတွက်ဆို ဘာကြောင့် ပိန်တာလဲ .... မျိုးရိုးကြောင့် လား ၊ Stress များ လို့လား ၊ အစားနည်း လို့ လား ၊ ဓမ္မတာ မမှန် လို့လား ...၊ အအိပ် အစား မမှန်တာ လား က အစ သေသေချာချာ လေ့လာစမ်းစစ် ပြီး အစားအသောက် အနေ အထိုင် က စလို့ နည်းစနစ် မှန်မှန် နဲ့ လေ့ကျင့် ကစားသွားဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ် .....
မေး ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး မျက်နှာဖောင်းတာ နဲ့ မေးနှစ်ထပ် အဆီ ရှိတာ ချလို့ရပါသလား ....
ဖြေ ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ လူ ပိန်သွားရင် မျက်နှာဖောင်းတာ လည်း ခြုံပြီးတော့ သွယ်ကျ သွားနိုင်ပေမယ့် .... မျက်နှာ နဲ့ မေးနှစ်ထပ် အဆီ သီးသန့်ချ သလိုတော့ မကျသွားနိုင်ပါဘူး ... မျက်နှာတင်းရင်းချင်တာ အတွက် ဆိုရင်တော့ မျက်နှာတင်းစေ တဲ့ လေ့ကျင့် ခန်းတွေ ကြိုလုပ်ထားလို့ ရသလို .... Facial Massage ကို ပုံမှန်လေး လုပ်သွားရင် လည်း မျက်နှာ ကို တင်းရင်းစေနိုင် ပါတယ်.....
မေး ။ အရမ်း ပိန်တဲ့သူ ၀ ချင်ရင်..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ..... ဖြေ ။ Structure ရင်တွေ ၊ တင်တွေ တက်ချင်တာ မျိုး အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး တက်အောင်လုပ်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် ပိန်သလဲ ပေါ် မူတည်ပြီး ရက်ခြား ကစားခိုင်းရပါတယ် ....သာမန် ပိန်ရုံလောက် ဆို ၃ ရက် ကစား တစ်ရက်နားလောက် ဆိုရပေမယ့် .... ပေါင် ၇၀ / ၈၀ မျိုးလောက် ပိန်နေတာ ဆိုရင်တော့ တစ်ရက် ကစား တစ်ရက် နားလောက် ကစားမှ ရပါမယ်... ကစားတဲ့ အချိန် မှာ အဓိက ကိုယ်တက်ချင်တဲ့နေရာ တွေ ကို ဦးစားပေးပြီး စိတ်ထည့် ကစားရသလို .... ပဲ ၊ အာလူး ၊ အဆီမပါ တဲ့ နို့ ၊ အသား ဓာတ် ၊ အာဟာရဖြစ် မယ့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေ ကို လည်း စားပေးဖို့ နဲ့ ... ရေများ များ သောက် ဖို့ ...လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံတွေ များများ စားဖို့လိုပါ တယ် ....အဲဒါ မှ သာ ကစားထားတာရယ် ၊ ပို မပိန် သွား ရလေအောင် ခန္ဓာကိုယ် ကို ရက်ခြား အနားပေးထားတာ တွေ ကြောင့် အနည်းဆုံး ၃ လ လောက် ဆို စပြီး သိသာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်... အဲဒီ အချိန်တွေ မှာ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ဖို့ လိုအပ် သလို ၊ အညောင်းမိတာ နဲ့ Stress တွေ ကို လည်း အတတ်နိုင် ဆုံး ရှောင် ဖို့လိုပြီး နဲ့ သွေးသားမှန်ဖို့ ပိုပါ ဂရုတစိုက်နေထိုင် သွားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်.....
မေး ။ ရင်သား ကြီးချင်တာ ကို လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဘဲ စက်နဲ့ ဆေးလိမ်း Massage လုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန်တို အတွင်း လှပလာနိုင်ပါသလား ....
ဖြေ ။ ရင် ရဲ့ သဘောတရား က ဆီလီကွန်ထည့်တာ နဲ့ ဆေးထိုးတာ က လွဲလို့ ဘာနည်း နဲ့ ဘဲ လုပ်လုပ် ဗြုန်းခနဲ ကြီးလာဖို့ မလွယ်ပါဘူး .... ကစားမယ် ဆိုရင်လည်း နှစ် နဲ့ ချီ အချိန်ယူရသလို .... အစားအသောက် ကို က အစ .. ရင် ကစားတယ် ဆိုရင် ..တက်ဖို့ အရှိန်ရအောင် ... ရက်ခြား ကစားပေးဖို့ လိုသလို ... နားတဲ့ရက်တွေ မှာ လည်း အာဟာရဖြစ်မယ့် အစား အသောက် တွေ စားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ..... နောက်တစ်ခု က အချိန်တို အတွင်း ဆေးလိမ်းပြီး ရင်ကြီးတဲ့ စက်တွေ နဲ့ Massage လုပ်တာမျိုး ပါ ... အမ တို့ ဆိုင်မှာ လည်း ရှိပါတယ်.... သူ က လည်း တပွဲထိုးတင်းသွားတဲ့ သဘောမျိုးလောက်ဘဲ ရှိပါတယ်.... အဆီပို ဆိုလို့ မူးလို့တောင် ရှုရစရာ မရှိနိုင်တဲ့ လူမျိုးတွေ ကို အချိန်တို အတွင်း အဆီပို အစုလိုက် အခဲ လိုက် ရောက်လာစေဖို့ မလွယ်ကူ တဲ့ သဘောမျိုးပါဘဲ .... နောက် မျိုးရိုး လိုက်လို့  သေးတာမျိုး ဆိုရင်လည်း ကစားတာ ဖြစ်ဖြစ် / စက်နဲ့ လုပ် တာ ဖြစ်ဖြစ် ကြီးဖို့ ပိုလို့တောင် ခက်ပါသေးတယ်..
မေး ။ အဆီချလို့ ပိန်သွားရင် ဗိုက်ကြောပြတ်နိုင်ပါသလား ... ဗိုက်ကြောပြတ်တာ ကို ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရပါမလဲ ။
ဖြေ ။ အဆီချလိုက်လို့ ပိန်သွားရုံ နဲ့ ဗိုက်ကြော က မပြတ်ပါဘူး ... ဗိုက်ကြောပြတ် တယ် ဆိုတာ ဥပမာ ပိန်တဲ့သူ ကနေ အရမ်း ၀ လာတာမျိုး .... ဒါမှမဟုတ် ရင် ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ လရင့်လာတာ နဲ့ အမျှ ဗိုက်ကြီး က အဆမတန် ပူပူလာ ရတာ လိုမျိုး မှာ သာ ဗိုက်ကြော နဲ့ တခြား ၀လာရင် ၀လာသလို ပေါင်ကြောတွေ ၊ ခြေသလုံးကြောတွေ ပါ ပြတ်ထွက်တတ်ပါတယ်.... ပြတ်သွားပြီး ရင်တော့ ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ အမျိုးအစား Lotion ကို လိမ်းလိမ်း မပျောက်ပါဘူး ..အချိန်ကြာလာတာ နဲ့ အမျှ တဖြေးဖြေး သာ မှိန်သွားနိုင်ပါတယ် ... ကောင်းတာ တော့ စ ၀ လာတာ နဲ့ အစားထိန်း ရင် ထိန်း ၊ ဒါ မှ မဟုတ်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကိုယ်ဝန် ၃ လလောက် မှာ ကိုယ်ပြတဲ့ OG က လိမ်းခိုင်းတာ နဲ့ ဗိုက်ကြောမပြတ်အောင် လိမ်းတဲ့ Lotion ( သို့ ) Cream တစ်ခုခု ကို ကြိုလိမ်းထားသင့်ပါတယ် ...အဲဒီလို လိမ်းရာမှာ လည်း လိမ်းပြီးရင် အသားထဲ စိမ့်ဝင်အောင် ခဏ ထားပြီး မှ အကျီ ကို ပြန်ဖုံးသင့်ပါတယ်..့နိုမို့ ဆိုရင် လိမ်းထားသမျှ အကျီ မှာ ပြန်ပေကုန်တဲ့ အတွက် အကြာပြတ်တာ ကို ထိရောက်အောင် မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး ။
မေး ။ ၀လာရင် အောက်ပိုင်းကြီးကြီးလာပြီး ပေါင်ဘေး နှစ်ဘက်မှာ အဆီပိုတွေ စုစုလာတာ အဆီချရင် / ကစားရင် ကျသွားနိုင်ပါသလား .....
ဖြေ ။ ၀လာရင် အောက်ပိုင်းကြီးလာတတ်တယ် ဆိုတာ မျိုးရိုး နဲ့ ဆိုင်သလို အရိုး အဆစ် ဖွဲစည်း ပုံ နဲ့ လည်း သက်ဆိုင်လာပါတယ်.....ငယ်တုန်း မှာ လက်ကောက်ဝတ် ၊ ခြေကျင်းဝတ် တုတ်တဲ့သူ အများစု က ၀ လာရင် အောက်ပိုင်း ပိုကြီးလာတတ်သလို .... ကိုယ့်မိဘ ဆွေမျိုး / မျိုးရိုး မှာ အဲဒီလို လူတွေ ရှိရင် လည်း မျိုးရိုးလိုက်တတ် တာ တော်တော် များများ မြင်တွေ့ဖူးပါတယ်.....သူ က အဆီချ ရင် လည်း ခက်သလို ၊ ကစားရင် လည်း ခက်တဲ့ အတွက် .... စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ အချိန်တော်တော်လေး ယူရပါမယ် ... ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ... အသက်ကြီး လာရင် / ၀လာရင် အဲဒီလို ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ သူမျိုးတွေ ဆို ကြိုတင် သတိထားလို့ အစားအသောက် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ထားတာ အကောင်းဆုံးသာ ဖြစ်ပါတယ် ..
မေး ။ မီးဖွားထားပြီး ကလေး နို့တိုက်ခဲ့ရသူတွေ အတွက် လျော့ရဲတွဲကျလာတဲ့ ရင်သား ပြန်လည် တင်းရင်းလှပလိုတာ ကို ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ ။ ဖြေ ။ အကောင်းဆုံး က တော့ အချိန်ပေးပြီး စိတ်ရှည်ရှည် ဇွဲရှိရှိ နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး ကစားဖို့ ပါ .... အတွင်းခံ ဘရာဇီယာ တွေ ကို ပြန်ကားအောင် ၀တ်ဆင်မယ့် အစား စုစုစည်းစည်းထိန်းဝတ်ဖို့ နဲ့ ကိုင်းကြိုး ကို ကလေး နို့တိုက်စဉ်တလျှောက်လုံး ပါ တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်အောင် အမြဲ သတိထားပြီး ၀တ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်... ဆိုင်တွေ မှာ စက်တွေ နဲ့ လုပ်တဲ့ နည်းလမ်း အများစု က တပွဲထိုး တခဏသာ ရပါတယ်... .ရေရှည် မခံနိုင်သလို .... နဂိုလို ပြန်ပင့်သွားဖို့ဆိုတာ လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.... အဲဒီ အတွက် အတွင်းခံ ဘရာဇီယာ တွေ ကို ပြန်ကားအောင် ၀တ်ဆင်မယ့် အစား စုစု စည်းစည်းထိန်းဝတ်ဖို့ နဲ့ ကလေး နို့တိုက်စဉ် တလျှောက်လုံး ပါ ကိုင်းကြိုး ကို တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်အောင် အမြဲ သတိထားပြီး ၀တ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်... နောက် ဆီလီကွန် ထည့်မယ် ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်ရင် မလုပ်စေချင်ပါဘူး...အကယ်၍ လုပ်ချင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် သေသေချာချာ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ ဆိုင်မျိုး ၊ လုပ်သက်အများကြီး ရှိမယ့် ဆရာဝန်မျိုး နဲ့ သေသေချာချာ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး မှ လုပ်သင့်ပါတယ်....ကျွန်မ သိသလောက် ဆီလီကွန် ထည့်ထားတဲ့ သူဟာ Air- com ခန်း မှာ ၁ လ အနည်းဆုံး သတိထားပြီးနေရသလို နေပူထဲသွားခြင်း ကို လည်း ရှောင်ကြဉ် ရပါတယ်...နောက်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံရအောင် အဲဒီလို လုပ်ထားခါစ ၁ လ အတွင်း မှာ Massage မှန်မှန်လုပ်ပြီး ပုံသွင်းပေးရပါတယ်........
မေး ။ အဆီချ လိုက်တဲ့ အသားက ပျော့ပြဲ သွားနိုင်လား ။အကယ်၍ အသား လုံးဝ မပျော့ချင်ရင် ဘာလုပ်လို့ ရနိုင်မလဲ ..
ဖြေ ။ အဆီချလိုက်တဲ့ အတွက် ကျသွားတဲ့ အဆီပိုတွေ နဲ့ အတူ အသားအရည် ပါ အနည်းအကျဉ်း ပျော့သွားစေနိုင်တာကို ... လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး ပြန် ကျစ်အောင် ကစားလို့ ရနိုင်ပါတယ်.... ကျွန်မ တို့ ဆီ မှာတော့ အသားလုံးဝ မပျော့ချင်တဲ့ သူ ဆို Cellulite Burning & Skin Firming Treatment ကို ညွှန်ပေးပါတယ်....
မေး ။ ဆရာဝန်ကြီး က အဆီချလိုက် ဆိုလို့လာတာပါ ..... ကျွန်မ မှာ နှလုံးသွေးကြော ပိတ်နေတာ ( or ) နှလုံး အဆို့ရှင် တစ်ခု မကောင်းလို့ပါ ( or ) အမော မခံနိုင်လို့ပါ ( or ) အသဲ အဆီ ဖုံးနေတာ ( or ) သွေးတွင်း ကိုလက်ထစရော များနေတာ ( or ) အဆစ်အမြစ် ကိုက်နေလို့ ပါ ( or ) ကြီးပေါင်း တက်နေလို့ပါ ( or ) ခွဲစိတ် ရမှာ မို့ ၀ိတ် ချခိုင်းထားလို့ပါ ....
ဖြေ ။ ဆရာဝန်ကြီး က ပြောတဲ့ အဆီချလိုက် ဆိုတာ ..... ခေတ် စကား နဲ့ ၀ နေတယ် ... အဆီ သွားချလိုက်ရယ် ....လို့ နားလည်အောင် အလွယ်ပြော လိုက်တာပါ ...အဆီ သွားချလိုက် ဆိုတိုင်း က .... ကျွန်မ တို့လို ဆိုင်တွေ မှာ လုပ်တဲ့ အဆီချတာ ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး .....သွေးလှည့် ပတ်မှုကောင်းအောင် ၊ အမော အပန်းခံနိုင်လာအောင် ၊ သွေးတွင်း ကိုလက် စထရော လျော့အောင် ၊ အသက်ရှု လို့ ကောင်းလာအောင် ၊ လှုပ်ရှားမှု လုံးဝ မရှိတာ က နေ လှုပ်ရှားမှု ကလေးကြိုးစားလုပ်ပြီး ၀ိတ် လေး ကျအောင် လုပ် ဖို့ ဆိုလိုတာပါ .... ဆိုင်တွေ မှာ သွားချတဲ့ အဆီချ ဆိုတာ အပေါ်ယံ ခန္ဓာ ကိုယ် လှပအောင် သာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပေမယ့် ... တကယ့်တမ်း ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း က ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာ တွေ သက်သာပြီး နေလို့ထိုင် လို့ ကောင်းအောင်...သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းအောင် ဆိုတာ ကစား မှ သာ ရနိုင်ပါတယ် .... ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှု နဲ့ လာတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ စ ကစား မယ် ဆိုရင် အသက် ရှုလေ့ကျင့်ခန်း နဲ့ ဖြည်းညင်း သက်သာ တဲ့ လေ့ကျင့် ခန်းလေးတွေ က နေ စ ကစားပြီး မှ တဖြည်းဖြည်း အပင်ပန်းခံနိုင် / အမော ခံနိုင်လာ မှ နည်းနည်းချင်း တိုးတိုး ကစား သွားပြီး အနေအထိုင် အစား အသောက် ပါ ဆင်ခြင်သွားခြင်း အားဖြင့် နည်းစနစ် တကျ နဲ့ သွေးလှည့် ပတ်မှုကောင်းစွာ နဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ရဲ့ အတွင်းရော အပြင်က အဆီပိုတွေပါ ကျပြီး သွက်လက် ကျန်းမာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေး ။ GINGER မှာ Facial Srevice တွေ လုပ်ထားပြီးရင် နောက်ထပ် ဘယ်လောက်ကြာ မှ ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲ ။
ဖြေ ။Facial & Lifting / Shaping Package တွေလိုမျိုး လာလုပ်ထားတဲ့ သူ ဆို ဆက်ထိန်းတဲ့ သဘော နဲ့ ( ၁ ) လ တစ်ကြိမ်လောက် ပြန်လုပ်ရင် လုံလောက် ပါတယ် .... ၀က်ခြံ ၊ တင်းတိတ် ၊ နေလောင်ကွက် လိုမျိုး Package လုပ်ထားတဲ့သူ ဆို ရင်တော့ အတိမ်အနက် အထူအပါး အနည်းအများ ပေါ် မူတည်ပြီး ၂ ရက်ခြား ၃ ရက်ခြား က နေ တစ်ပတ်ခြား ...နှစ်ပတ်ခြားလောက်မှ ပြန်လုပ်ရတာ အထိ ရှိပါတယ်... မေး ။ သဘာဝနည်း နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်တာ မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကို ဖော်ပြပါ ....
ဖြေ ။ သဘာဝနည်း နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့နည်း ကို သုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ် အသုံးပြု မယ့် သစ်သီးတိုင်း မှာ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ စတာတွေ ရဲ့ ဓာတ်တွေ အများအပြားပါရှိနိုင်တာမို့ ရေသန့်ဖြင့် သေချာစွာ ဆေးပြီး မှ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်...